Ukuqesheka okujolise kwiGIS. Iintsomi ezichasene nenyani-Geofumed
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ukuqhelaniswa nokuqeshiswa kwi-GIS. Iingqungquthela ngokuchasene nenyaniso
Geospatial - GISegeomates My
Emva kokufunda i-athikili eqala ngokubuza ukuba ngaba abaqashi be-GIS bajonga ngokwenene, ndazibuza ukuba zezi zigqibo zingakanani extrapolate kumazwe ethu okuzalwa anezinto zawo ezinokuthi zifane okanye zahluke (mhlawumbi zahluke kakhulu) kwezakho.
'Izinto ezisetyenzisiweyo' ezisetyenziselwa isifundo zizo zonke izinikelo zengqesho kwi-GIS eyapapashwa kwiinkcukacha ezahlukeneyo zoluntu. Ezi zibonelelo ezithathwa ngabazingeli beentloko azizange zifakwe ngenxa yobungakanani bezobhengezo zabo.
Amagama asetshenzisiweyo asetyenziselwa ukurekhoda ukusesha umsebenzi kwiindawo ezintathu ezithandwa kakhulu eNew Zealand. "I-GIS, iJografi, Indawo, indawo, iJografi" yayinguye amagama asetyenziswe kule njongo.
Emva kokuba izaziso zibhaliswe, ulwazi oluqokelelweyo lufakwe, luqhekeza ukuphindaphindiweyo kunye 'neempembelelo ezingamanga'. Emva koko, iimpawu eziceliwe kwisithuba esifanele zikhishwe kwisaziso ngasinye. Iimpawu ezikhishwe kwaye zigcinwe zi:
Isihloko sonikezelo lomsebenzi
Ukupapashwa okwenziwa ngumfaki sicelo
Icandelo leshishini elikhulu lomfaki-sicelo
I-GIS njengemfuno ebalulekileyo okanye eyimfuneko yesibini
Izakhono zobugcisa ezifunekayo kwinqanaba lesoftware
Indawo yendawo kwaye,
Sicinga ukuba kubaluleke kakhulu ukuyeka apha kwaye ukhankanya imiba ethile ngaphambili ukubonisa izigqibo zesifundo. Makhe sibone:
I-'GIS yoshishino 'kunye neenkcukacha kunye neengcamango ezidibanisayo
"Esinye sezizathu zokuba ndenza ntoni le sifundo kukuba ndandifuna ukufumana indlela yokumisela misela isakhiwo se-GIS eNew Zealand. "kubhala uNathan Heazlewood, umbhali we papasho oko sathetha ngako Kwaye ngelixa kwinqaku lethu "Uninzi olunokwenzeka"Sizama ukucacisa umxholo, yonke into ibonakala ibonisa ukuba eli gama okwangoku Ivelisa amaninzi amanathandabuzo.
Gcina ukhumbule ukuba amanqaku amabini endiza kuthatha njengento yokubhaliweyo evela kumbhali ofanayo kunye nalo nyaka, i-2017. Ndiza kuthi ke, kunye nemvume yakho, uhlobo oluthetha ngalo "u-alimony" ukuhlalutya kuba, njengoko uya kukhangela ekufundeni, yonke into idibeneyo.
"Imveliso ye-GIS ingadideka. Ziyinkimbinkimbi "ziyigama apho uHeazlewood aqala khona isikhundla sakhe"Izizwe ezinkulu ze-GIS”. Kwaye uyaqhubeka, "Ukudideka akulunganga." Inqaku lokuqala. Ngaba sinokucaca kwengqiqo? Kwaye ukuba akunjalo, oko kwenzeka, sinokuyifumana njani ixesha esiza kuthiwa ngalo ndawo yomsebenzi kwaye ngokwenene si vumela ukuba wonke umntu siqonde oko sithetha ngako?
UNatan ulungelelanisa imigaqo esetyenziswa rhoqo: 'I-GIS Industry', 'Space', 'Geomatics', 'Geospatial', 'Indawo yeSayensi', 'Isebe elikhethekileyo leJografi' kwaye ekugqibeleni 'elinye ixesha' ( Apocalypse!). Nguwuphi kubo ku fanayo bhetele?
Oku akuyona ingxoxo encinci njengoko unokucinga. Ngenxa yale nto yokuqala yokudideka kuya kubakho ukungathandabuzeki okukhulu okuchaphazela ngokuthe ngqo imimandla emithathu yomsebenzi esetyenziswayo: isihloko 'somsebenzi esimeleyo, kwinqanaba le-GIS liyimfuno ebalulekileyo okanye eyimfuneko yomsebenzi kwaye, yintoni iqela eliphambili lenkampani? sicelo Masiqhubeke.
I-charter charm of the titles
Kwanele ukuthatha inxalenye encinci yezihloko ezahlukileyo ezisetyenziselwa ukukhetha "abaqeqeshi bendawo" ekufundeni iHeazlewood ukuqonda indlela okuphazamiseka ngayo le ndlela 'ye-jungle yezihloko kunye namahlelo' kukuba:
Ukuba inyathelo elinye kude ukuntywila, ngovuyo, sikhumbula inqaku "Izizwe ezikhulu ...". Kule, i-Heazlewood iphinda ihlaziye umsebenzi wethisis oluncedo kakhulu kwaye, ngokoluvo lwethu, sinceda ngendlela efanelekileyo ukucacisa le panorama nebulous.I sibini. Ngokuqinisekileyo, ngamakhadi ezoshishino funeka kubonakalisa ukuthengiswa okulungileyo kwaye, ngaloo nto ukuzimisela ukuzibonakalisa kwihlabathi ngendlela efanelekileyo, baqala ukuvelisa ukungafani okugqithisileyo: 'ophumelele', 'owona mntwana' kunye nenene 'ophezulu'. Ngaba umntu unokusixelela ngokucacileyo ubungakanani kunye nemida ngamnye zezihloko eziboniswe Uyazi na?ku qhekeka'imisebenzi phakathi kwezinye zazo? Umbuzo omuhle! Ndi cebisa hlaziywa itheyibhile epheleleyo epapashwe ngumlobi kunye itafile ehlanganisiweyo wadalwa nguye esekelwe kuphela kwiphando eyenziwe kodwa kwaye, ngaphezu kwakho konke, ngobuchule bakhe obubanzi kuloo ndawo.
"Into endiyigqibayo kukuba kwisebe le-GIS kukho ezine 'zizwe' ezinkulu:
(1) Iincwadi ...…
(4) I 'Techies' ”
Ngokusebenzisa umzobo uzama ukusinceda siqonde imbono yakho:
Jonga ngoku kunye 'nenkcazelo yakho':
"(1) '... Iincwadi ezizezinye' ikakhulu zabahlalutyi beenkcukacha ze-GIS kunye nabasebenzisi abajolise kuhlalutyo lwesayensi (ngenxa yoko uninzi lweziqu zabo zemisebenzi luphela '… GIST'). Ikwabandakanya (okanye inokubandakanya) ezinye iintlobo zabahlalutyi.
(2) '… Iigraphers' ngabantu abagxile ekuboniseni okanye emele ukubekwa kwedatha ngokwendawo, ezinje ngeekhathuni kunye 'nezihlobo' zazo.
(3) 'Imilinganiselo' ngabo bantu baqokelela idatha yejografi besebenzisa imilinganiselo yomlinganiso kunye nezixhobo zokucinga.
(4) 'I-Techies' zezo zisebenza njengohlobo lonxibelelwano phakathi kweshishini le-GIS kunye netekhnoloji. Ndibhekise apha kubaphuhlisi be-GIS kunye nabasebenza nabo. "
Emva kolu gqwesileyo (ukuqonda kwethu) inkcazo, umxholo wethu uphawule ngakumbi, akunjalo? Masibuyele kuhlalutyo lwethu.
I sibini. Imiba enomdla wokuhlalutya
En kwindawo yokuqala, Ngayiphi indlela, ngesaziso esilula, kunokwenzeka ukuba unqume ukuba I-GIS okanye ayikho icandelo lomsebenzi oyintloko yenkampani efake isicelo?
Oku akubonakali kulula kakhulu ukucacisa kuqalaucacisa uHeazlewood, kunye neenkcukacha:
Kukho imibutho ukuba nangona iphakanyiswa ngokubanzi ngomfanekiso wentengiso igxile kwingingqi ethile, ngokwenene inikeza iinkonzo kumashishini angaphezu kweyodwa. Leyo yimeko yeenkampani zobunjineli zenkampani eziza kunika iinkonzo kumashishini afumaneka kwiinkalo zonxibelelwano, iinkonzo kunye nokwakhiwa.
Kukho imibutho ukuba 'ukungena' ngokweendidi ezahlukeneyo, ezifana abe Kwimeko Ministry of Transport ezinokuhlelwa kudidi Central kaRhulumente, kodwa nazo kakuhle kakhulu kufuneka zihlelwe kushishino zokuhamba.
Kuzo zombini iimeko zilungelo lomhlalutyi, sekelwe kumava akho, oza kwenza izigqibo azibona zilungele.
En indawo yesibini kunye nokunyamekela konke, zithini okanye zithini izakhono zobugcisa ezifunekayo kwizinga lesofthiwe echazwe kwizaziso zengqesho ze-GIS? Apha, umbhali uyanda kakhulu:
Wayebaphepha ingqalelo iimveliso software 'imveliso iintsapho kunye nalawo ntsapho kwakufuneka, umzekelo kunokuba AutoCAD lungelo CAD nje.
Ngakolunye uhlangothi, 'izixhobo ezihambelanayo' zongezwa kuhlalutyo, njengeSQL okanye i-HTML. Le nto inengqiqo. Kwaye kusinceda sibe nokulinganisela okungcono kwezinto iimarike ezifunayo kuthi.
Kuqondwa ukuba ezinye izaziso ezichazwe ngaphaya kohlobo olunye lwesofthiwe. Mhlawumbi ngomnqweno wokucoca kunye nenxalenye yoluntu onomdla. Apha sithatha umzekelo obhaliweyo ngumlobi, kodwa ngokuqinisekileyo kufuneka uqhelane kwiimeko zabo. Uhlobo lokuvavanya ulwazi, apha sihamba:
“Siyinkampani esebenza no… (ibabble, ibulble, ngoku iza into enomdla) a) Silindele ukuqonda okubalulekileyo html5, css3 kunye namava kuwo ulwimi lwentsimbi, b) Ukuqonda oku kulandelayo kuyimfuneko: Leekore, CDN, xss, ukwamkela headers, ddd, CQRS, TDD, ABANYE, isiganeko zenkxaso, sub pub, microservices soa, mvc, mvvm, IOC, eyomileyo UMPHATHI y YAGNI"Ukuma, simile, saqhubeka:" Sisebenzisa coffeescript, SVG, d3, crossfilter, velocityjs, iphetshana, momentjs, ibhuthstrephu, ngaphantsi, nodejs, ithamo, redis RabbitMQ, expressjs, impondo, oauth2, passportjs kunye docker... " Ngoku i-end point (i bhetele ingaqala apha) "c) Abanye ulwazi izikhokelo zeemephu zewebhu y Ubuchwepheshe beGIS".
Phawula ukuba ithi "nolunye ulwazi kwi-GIS"Abazange bafune iingcali? Kubonakala ngathi 'ubuchule'Ayibandakanyi i-GIS kakhulu ... kungcono siyiyeke apho kwaye siqhubeke.
I-31% yeentengiso ayizange ichaze nayiphi na isofthiwe ethile (bathetha kuphela izinto ezifana "kufuneka babe nobuchule kwi-GIS"). Oku kubonakala ngathi yilelo icala kwicala. Kwaye ibonisa kakhulu ngokufanelekileyo umbhali: "ayikwazi kubakho ngokuthembekileyo kwangaphambili ezi zilumkiso ngenxa yokuba abaqeshi bacinga ukuba xa kukho GIS, wazi konke, okanye ukuba abaqeshi abayazi zingqalileyo ukuba izakhono bafuna". A ilungelo umdla kakhulu? Ndazi njani?
Umzobo obonisa ubugcisa bekhompyutha olulungiselelweyo ngokwexesha elininzi kwii-140 izibhengezo zeesampuli ezihamba nohlalutyo:
Kwaye ngenxa yokubaluleka kwayo, siyazivumela ukuba sibonise kwitafile, ezilishumi (10) ezibizwa ngokuba zixhobo eziphezulu:
Isixhobo Inombolo yokuthetha
En indawo yesithathu, umvuzo. Khumbula ukuba isifundo senziwe eNew Zealand. Imali yayo, iDola yaseNew Zealand (iNZD), inokulinganisela 1 NZD = 0.72 USD (Idola yaseMelika). Kuya kufuneka yongezwe ukuba, kuba ziyinyani eyahlukileyo kwilizwe ngalinye, singayithatha njengedatha yokubonisa. Kwibhokisi ebonisiweyo, 'k' ngokuqinisekileyo ibonisa 'amawaka':
Ithenda yesine. Eyinyani ngokubhekiselele kwiFiction. Izilumkiso kufuneka ziqwalaselwe
Kubonakala Kucacile ukuba bonke uphando thaca esidlangalaleni kwakunye (kwaye mhlawumbi kuqala) ezifunyanisiweyo ukuba Unokuwothula ukuba kufuneka lwenzeka ngongoma kwaye kuqinisekiswe nyaniso. UHeazlewood ubonisa ukwesaba kwakhe kwaye uyalumkisa:
Hlalani niqaphile xa nibona 'imibono' kunye 'neenkcukacha ezahlukeneyo'. Kufuneka sikwazi ukubona ezo 'iingcali' ezizibikezelo ezingezantsi bu bungqina kakhulu kunoko, bajonge ukuvakalisa ngokuthe ngqo kwiinkampani abazimelayo.
Hlalani niqaphele 'iimvo zengxoxo'. Ezi zophando ezenziwa 'ngokuzithandela' ngokuqhelekileyo azifikeli iifom zeemveliso zonyani, ezingakhokelela kwizigqibo eziphosakeleyo.
Ukuphelisa lo mboniso ngokucebisa ukuba zonke izifundo zolu hlobo zimele zihambe 'ngesixhobo sedatha' yazo (njengoko zenzayo) kuba abanye bangenza ukuhlalutya okufanayo kunye qinisekisa ukuba kunokwenzeka ukufikelela kwizigqibo ezifanayo.
Abaphulaphuli abajoliswe kulolu cwaningo kunye neziphakamiso ezivela kuzo
Umbhali ubonisa ukuba ngumfundisi kunye / okanye umcebisi weziqinisekiso kunye nabafundi be-GIS. Bayixelela ke ukuba 'bavame ukuba ulwazi oluncinane kakhulu shishini apho Umalunga nokungena bangaqondi ngokulinganayo na amathuba emisebenzi kunye nezifundo / izifundo kufuneka kuqhubeka nokuphucula amathuba emisebenzi ekufumaneni. " Yonke le yeso sizathu esongezelelweyo sokwenza uphando esilithetha ngalo.
Ukungazi okuthethwa ngabantu abancinci yinto engokoqobo kuyo nayiphi na imeko. Ngenxa yesi sizathu, sikhankanya kwaye sivumelana nombhali ngokubaluleka kokusebenza kunye nedatha ethembekileyo evumela ukufika kwiinjongo ezijoliswe kuyo.
Kwaye njengoko kunjalo nawuphi na umcebisi omiselweyo ekumiseni bonke abaphumeleleyo nabafundi ukuba bafunde umsebenzi wabo akufanele ukhathazeke kakhulu malunga nokwazi nokufaka isicelo bonke izixhobo ezichazwe kwisaziso somsebenzi ezikhutshiweyo nezidweliswe apha ngasentla, ngokuqinisekileyo ezivelise ngaphezulu kwekram enye kuninzi. Emva koko yongeza le nto ukuba asithandabuzi ukuba sabelane ngayo kunye nokukhuphela amagama nezwi: "UKUBA AWUNAZO ZONKE IZIKHONO EZIBALIWEYO, UNGAKHATHAZI." Ukongeza ngokuhlekisayo: "Ndive kuphela amanye ala magama kwindawo endisebenza kuyo." I sibini kuthathelwa ingqalelo kakhulu.
Kwaye safika! Siqaphelisa apha kuphela abo basinika ithuba lokuvakalisa izimvo ezilandelayo:
Un 53% izaziso ezipapashiweyo zithatha i-GIS njengesiqhelo kwiimfuno eziceliwe kwisithuba, ngelixa 47% ijolise kwi-GIS njengenxalenye yesiseko yesicelo sakho.
Amashishini karhulumente wengingqi anikezela izihlandlo ezithathu izikhundla ezingaphezulu kwee-arhente karhulumente
I-15% yemisebenzi kwi-GIS inxulumene nokuthutha, ukusetyenziswa okanye ukuhanjiswa.
Nsuku zonke izaziso zomsebenzi ezipapashwe kwi-GIS eNew Zealand.
Siyacaca ukuba inyaniso yelizwe ngalinye ihlukile. Nangona kunjalo, asikwazi ukuyeka ukuzibuza ngokusingqongileyo:
Ingakanani i-GIS efunekayo njengecandelo elisisiseko kwiziphakamiso zomsebenzi?
Kuxhomekeke kukwahlulwahlulwahlulwa kobupolitiko-kwendawo yakho, kwindawo apho abantu - urhulumente okanye icandelo labucala zezona zindululo zinkulu zenziweyo kwi-GIS?
Ziziphi iindawo zoshishini ezifuna kakhulu ootitshala kwi-GIS?
Ngamaxesha amaninzi ukunikezelwa kwemisebenzi kubonakala kwi-GIS kwiimidiya ezahlukeneyo?
Imibuzo esifanele sizame ukufumana iimpendulo. Ngoko sigqiba esi sihloko ngombuzo esithemba ukuba kufuneka sibe ngenye yeengongoma zokucinga:
Ngaba uyazi ukuba yintoni imbambano ye-GIS kunye neendlela zayo kwilizwekazi okanye kwilizwe eliphantsi?
Ifumaneka Mahala-Ithempleyithi yokuguqula i-UTM ibe yiGeographic coordinates
Phila-iNkanyamba i-Irma-Umbutho uqhelana nokusebenzisana ne-geospatial
UMiguel A. Martinez Yordan uthi:
Inqaku eligqwesileyo. Uphando oluhle kakhulu kunye nohlalutyo lweziphumo kwaye ndivumelana ngokupheleleyo nale nto ichazwe apha. Kudala ndigxeka amagama ezikhundla ezicelwe kwi-Intanethi kudala zizisa ukubhideka kunokucaciswa. Ingqikelelo yoHlalutyo lweNdawo ilahlekile kwaye ithathelwe indawo “nguMphuhlisi” okanye “uMcwangcisi”. Kujongwe ukuhlawula ukwazi i-GIS kodwa kujongwe ukuba sibe ziingcali kwiinkqubo kunye nolawulo lwenethiwekhi. Ndicinga ukuba lixesha lokuba i-GIS inikwe ilayisensi kwaye ilawulwe phantsi kwamasebe eJografi kumazwe ngamazwe.